တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေဆို သူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်မှစ၍ Website မှတဆင့် အခမဲ့ကြည့်ရှု နိုင်မည်။ - Achawlaymyar
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေဆို သူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်မှစ၍ Website မှတဆင့် အခမဲ့ကြည့်ရှု နိုင်မည်။
January 13, 2021 by Achawlaymyar
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေဆို သူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်မှစ၍ Website မှတဆင့်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မည်
အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ဆက်လက် ထိန်းချုပ် နိုင်ရေး သတ်မှတ်ချက် များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆို သူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက် နံနက် (၆) နာရီမှ စတင်၍ https://mmexamscore .org တွင် ဝင်ရောက်ပြီး မိမိ၏ခုံအမှတ် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ် (ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်) တို့ကို ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ မိမိတို့၏ အမှတ်စာရင်းများကို ကြည့်ရှု နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရုံးများသို့ လာရောက်လျှောက် ထားခြင်း မပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံ ထားပြီး ရုံးများတွင် အမှတ် စာရင်း ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်းနင့် Covid-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် တားဆီးနိုင်မှု အခြေအနေ အရ အမှတ်စာရင်းများကို ထုတ်ပေးမည့် အစီအစဉ်အား မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ ကြိုတင် အသိပေးမည် ဟုသိရ သည်။
အမှတ်စာရင်းကြည့်ရှုနည်း လမ်းညွှန် ရုပ်သံဖိုင်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Facebook Page ဖြစ်သည့် https://www.facebook .com/moe. gov .mm၊
မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၏ အမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်မည့် Website ဖြစ်သည့် https://mmexamscore.org နှင့် Facebook Page ဖြစ်သည့်
https://www.facebook .com/exams .mm တို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ စာမေးပှဲဖွဆေို သူမြား၏ အမှတျစာရငျးကို ဇနျနဝါရီလ ၁၇ ရကျမှစ၍ Website မှတဆငျ့ အခမဲ့ကွညျ့ရှု နိုငျမညျ။
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ စာမေးပှဲဖွဆေို သူမြား၏ အမှတျစာရငျးကို ဇနျနဝါရီလ ၁၇ ရကျမှစ၍ Website မှတဆငျ့
တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့စာမေးပှဲဖွဆေိုသူမြား၏ အမှတျစာရငျးကို အခမဲ့ကွညျ့ရှုနိုငျမညျ
အခမဲ့ကွညျ့ရှုနိုငျ မညျဖွဈကွောငျး ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ဇနျနဝါရီလ ၁၂ ရကျတှငျ သတငျးထုတျပွနျ သညျ။
ရောဂါ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုကို ဆကျလကျ ထိနျးခြုပျ နိုငျရေး သတျမှတျခကျြ မြားနှငျ့ အညီ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ စာမေးပှဲ ဖွဆေို သူမြား၏ အမှတျစာရငျးကို ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊
ဇနျနဝါရီလ (၁၇) ရကျ နံနကျ (၆) နာရီမှ စတငျ၍ https://mmexamscore .org တှငျ ဝငျရောကျပွီး မိမိ၏ခုံအမှတျ နှငျ့ မှေးသက်ကရာဇျ (ရကျ၊ လ၊ ခုနှဈ) တို့ကို ပွညျ့စုံ မှနျကနျစှာ ဖွညျ့စှကျ၍ မိမိတို့၏ အမှတျစာရငျးမြားကို ကွညျ့ရှု နိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
ရုံးမြားသို့ လာရောကျလြှောကျ ထားခွငျး မပွုရနျ မတ်ေတာရပျခံ ထားပွီး ရုံးမြားတှငျ အမှတျ စာရငျး ထုတျပေးမညျ မဟုတျကွောငျးနငျ့ Covid-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျ တားဆီးနိုငျမှု အခွအေနေ အရ အမှတျစာရငျးမြားကို ထုတျပေးမညျ့ အစီအစဉျအား မွနျမာနိုငျငံစာစဈဦးစီးဌာနမှ ကွိုတငျ အသိပေးမညျ ဟုသိရ သညျ။
အမှတျစာရငျးကွညျ့ရှုနညျး လမျးညှနျ ရုပျသံဖိုငျကို ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၏ Facebook Page ဖွဈသညျ့ https://www.facebook .com/moe. gov .mm၊
မွနျမာနိုငျငံစာစဈဦးစီးဌာန၏ အမှတျစာရငျးထုတျပွနျမညျ့ Website ဖွဈသညျ့ https://mmexamscore.org နှငျ့ Facebook Page ဖွဈသညျ့
https://www.facebook .com/exams .mm တို့တှငျ ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ (၁၄) ရကျနမှေ့စ၍ ကွညျ့ရှုနိုငျမညျဖွဈသညျ။
မိန်းကလေးများ အထူးဖတ်သင့်တဲ့ အံမခန်းကောင်းလွန်း တဲ့ သံပုရာသီးအစွမ်း
ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ သင့် ဖူးစာရှင်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ